GỤỌ NKE Albanian Arabic Armenian (West) Bicol Cambodian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Marathi Maya Mizo Moore Myanmar Niuean Norwegian Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Rarotongan Romanian Samoan Sepedi Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Venda Vietnamese
‘Anyị dị nanị afọ 12. Anyị apụghị imetụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na agha n’ụzọ ọ bụla, ma anyị chọrọ ịdị ndụ! Anyị na-eche udo. Ànyị ga-adị ndụ hụ ya?’—Ụmụ akwụkwọ nọ na klas nke ise
‘Anyị chọrọ ịga akwụkwọ na ileta ndị enyi na ezinụlọ anyị n’atụghị ụjọ ịbụ ndị a tọọrọ. Enwere m olileanya na ndị ọchịchị ga-ege ntị. Anyị chọrọ ndụ ka mma. Anyị chọrọ udo.’—Alhaji, onye dị afọ 14
OKWU ndị a na-emetụ n’ahụ́ na-egosi olileanya sitere n’obi nke ndị na-eto eto bụ́ ndị hụsiworo anya ruo ọtụtụ afọ n’ihi ọgụ ime obodo. Nanị ihe ha chọrọ bụ ibi ndụ dị otú o kwesịrị. Ma ime ka olileanya mezuo anaghị adị mfe. Ọ̀ dị mgbe anyị ga-ahụ ụwa nke agha na-adịghị na ya ná ndụ anyị?
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, e mewo mgbalị zuru ụwa ọnụ iji kwụsị agha obodo ụfọdụ site n’ịrụgide ndị ahụ na-alụrịta agha ịbịanye aka n’akwụkwọ nkwekọrịta udo. Mba ụfọdụ ezigawo ndị agha nchebe udo iji hụ na e mezuru nkwekọrịta ndị dị otú ahụ. Ma, ọ bụ mba ole na ole nwere ego ma ọ bụ ọchịchọ ịchịkwa mba ndị dị n’ebe dị anya bụ́ ebe oké ịkpọasị na inyo mmadụ enyo na-eme ka nkwekọrịta ọ bụla òtù ndị na-ebusorịta onwe ha agha mere ghara nnọọ isi ike. Ọtụtụ mgbe, agha na-ebirighachi ọkụ nanị izu ma ọ bụ ọnwa ole na ole e kwekọrịtasịrị ịkwụsị ya. Dị ka ụlọ ọrụ Stockholm International Peace Research Institute na-ekwu, “udo na-esi ike nnweta mgbe ndị na-alụ agha nwere ọchịchọ na ikike ịnọgide na-alụ agha.”
N’otu oge ahụ, agha ndị a na-adịghị akwụsị akwụsị ndị na-eti ọtụtụ akụkụ nke ụwa ihe otiti na-echetara Ndị Kraịst otu amụma Bible. Akwụkwọ Mkpughe na-ekwu banyere otu oge pụrụ iche n’akụkọ ihe mere eme bụ́ mgbe onye na-agba ịnyịnya ihe atụ ‘ga-ewepụ udo n’ụwa.’ (Mkpughe 6:4) Ihe a na-ese onyinyo agha na-adịghị akwụsị akwụsị bụ akụkụ nke ihe ịrịba ama ọtụtụ ihe mejupụtara bụ́ nke na-egosi na anyị bi n’oge a kọwara na Bible dị ka ‘ụbọchị ikpeazụ.’ * (2 Timoti 3:1) Otú ọ dị, Okwu Chineke na-emesi anyị obi ike na ụbọchị ikpeazụ ndị a ga-eduga n’udo.
Bible na-akọwa n’Abụ Ọma 46:9 na ka e wee nweta ezi udo agha ga-akwụsị, ọ bụghị nanị n’otu akụkụ nke ụwa, kama n’ụwa nile. Ọzọkwa, otu abụ ọma a kwuru kpọmkwem banyere mbibi nke ngwá agha ndị e nwere n’oge Bible—ọta na ube. N’otu aka ahụ, a ghaghị ibibi ngwá agha na-amụba amụba nke oge a ma ọ bụrụ na ọ dị mgbe ihe a kpọrọ mmadụ ga-ebi n’udo.
Otú ọ dị, ọ bụ ịkpọasị na anyaukwu na-eme ka agha sikwuo ike, ọ bụghị mgbọ na égbè. Anyaukwu bụ isi ihe na-akpata agha, ịkpọasị na-edugakwa mgbe mgbe n’ime ihe ike. Iji wepụ echiche ndị a na-emebi ihe, ọ dị ndị mmadụ mkpa ịgbanwe otú ha si eche echiche. Ọ dị ha mkpa ka a kụziere ha ibi n’udo. Ya mere, onye amụma oge ochie bụ́ Aịzaịa kwuru n’ezie na agha ga-akwụsị nanị mgbe ndị mmadụ ‘na-adịghịzi amụ agha.’—Aịsaịa 2:4.
Ma, ka ọ dị ugbu a, anyị bi n’ụwa nke na-akụziri ndị okenye na ụmụaka, ọ bụghị uru udo bara kama otuto nke agha. N’ụzọ dị mwute, a na-akụziri ọbụna ụmụaka otú e si egbu mmadụ.
Ha Mụtara Igbu Mmadụ
Mgbe ọ dị afọ 14, Alhaji ghọrọ onye agha na-anọghịzi n’ọrụ agha. Ọ dị nanị afọ iri mgbe ndị agha nnupụisi jidere ya ma kụziere ya ka e si eji égbè AK-47 alụ ọgụ. Dị ka onye a manyere ịrụ ọrụ agha, ọ kwakọọrọ nri ndị mmadụ ma gbaa ụlọ ọkụ. O gbukwara ma bepụ ndị mmadụ akụkụ ahụ́. Taa, ọ na-esiri Alhaji ike ichefu agha na ime mgbanwe iji bie ndụ dị ka onye nkịtị. Abraham, bụ́ nwatakịrị ọzọ ghọrọ onye agha, mụtakwara igbu mmadụ, o sikwaara ya ike inyefe ngwá agha ya. O kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ha asị m hapụ égbè m lawa, amaghị m ihe m ga-eme, otú m ga-esi na-enweta ihe m ga-eri.”
Ihe karịrị ụmụntakịrị 300,000 bụ́ ndị agha—ma ndị nwoke ma ndị nwanyị—ka na-alụ agha ma na-anwụ n’agha obodo ndị na-eti mbara ala anyị ihe otiti. Otu onye ndú nke òtù nnupụisi kọwara, sị: “Ha na-erube isi n’iwu e nyere ha; ha adịghị eche echiche ịlaghachikwuru ndị nwunye ma ọ bụ ezinụlọ ha; ha adịghịkwa atụ egwu.” N’agbanyeghị nke ahụ, ụmụaka ndị a chọrọ ma kwesị ibi ndụ ka mma.
Ná mba ndị mepere emepe, ọnọdụ ọjọọ nke nwatakịrị bụ́ onye agha bụ ihe a na-apụghị ichetụ n’echiche. N’agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ụmụaka bi n’obodo ndị mepere emepe na-amụ ka e si alụ agha n’ụlọ ha. N’ụzọ dị aṅaa?
Were José dị ka ihe atu, bụ́ onye si n’ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Spen. Ọ bụ onye nọ n’afọ iri na ụma nke na-enwe mmasị n’ọgụ aka na ụkwụ. Ihe onwunwe ya o ji kpọrọ ihe karịsịa bụ mma agha ndị Japan nke nna ya zụtaara ya dị ka onyinye Krismas. O nwekwara mmasị n’egwuregwu vidio, karịsịa ndị a na-eme ihe ike na ha. N’April 1, 2000, o ṅomiri oké iwe nke onye ọ na-enwe mmasị ikiri na TV. N’ime ihe ike nke na-enweghị nchịkwa, o ji mma agha ahụ nna ya nyere ya gbuo nna ya, nne ya na nwanne ya nwanyị. “Achọrọ m ịnọ nanị m n’ụwa; achọghị m ka nna m na nne m na-achọgharị m,” ka ọ kọwaara ndị uwe ojii.
Mgbe ọ na-ekwu banyere mmetụta ntụrụndụ a na-eme ihe ike na ha na-enwe n’ahụ́ ndị mmadụ, onye na-ede akwụkwọ na onye na-achịkwa ndị agha bụ́ Dave Grossman sịrị: “Anyị eruwela ebe ihe na-adịkwaghị emetụ anyị n’ahụ́ bụ́ ebe ịkpatara ndị ọzọ ihe mgbu na nhụjuanya ghọworo ihe ntụrụndụ: inweta ihe ụtọ dị ka a ga-asị na mmadụ so na-eme ihe ike ahụ kama ịsọ ya oyi. Anyị na-amụta igbu mmadụ, anyị na-amụtakwa inwe mmasị na ya.”
Ma Alhaji ma José mụtara igbu mmadụ. Ọ dịghị onye n’ime ha bu n’obi ịghọ ogbu mmadụ, ma otu ọzụzụ ma ọ bụ ọzọ merụrụ echiche ha. Ọzụzụ dị otú ahụ—ma è nyere ya ụmụaka ma ọ bụ ndị toro eto—na-akụ mkpụrụ nke ime ihe ike na agha.
Ịmụta Udo Kama Ịmụ Agha
A pụghị inwe udo na-adịgide adịgide ebe ndị mmadụ ka na-amụ igbu mmadụ. Ọtụtụ narị afọ gara aga, Aịzaịa onye amụma dere, sị: “Ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na ị ṅararịị ntị n’ihe nile [Chineke] nyere n’iwu! udo gị ewee dịworịị ka osimiri.” (Aịsaịa 48:17, 18) Mgbe ndị mmadụ nwetara ezi ihe ọmụma nke Okwu Chineke ma mụta ịhụ iwu Chineke n’anya, ha ga na-asọ ime ihe ike na agha oyi. Ọbụna ugbu a, ndị nne na nna kwesịrị ijide n’aka na egwuregwu ndị ụmụ ha na-egwu adịghị akwalite ime ihe ike. Ndị toro eto pụkwara ịmụta imeri ịkpọasị na anyaukwu. Ndịàmà Jehova achọpụtawo ugboro ugboro na Okwu Chineke nwere ikike ịgbanwe àgwà mmadụ.—Ndị Hibru 4:12.
Tụlee ihe banyere Hortêncio. Ọ bụ nwa okorobịa mgbe a manyere ya ịghọ onye agha. E mere ọzụzụ agha iji “kụnye ọchịchọ nke igbu ndị ọzọ n’ime anyị na ịghara ịtụ ụjọ igbu mmadụ,” ka ọ na-akọwa. Ọ lụrụ agha n’otu agha obodo were ogologo oge n’Africa. “Agha ahụ metụtara àgwà m,” ka o kwetara. “Ọbụna ruo taa, m ka na-echeta ihe nile m mere. Ihe ndị a manyere m ime na-ewutebiga m ókè.”
Mgbe onye agha ibe Hortêncio gwara ya okwu banyere Bible, o metụrụ ya n’obi. Nkwa Chineke dị n’Abụ Ọma 46:9 banyere iwepụ ụdị agha nile masịrị ya. Ka ọ na-amụkwu Bible, otú ahụ ka ọchịchọ ya maka ịlụ agha na-ebelata. N’oge na-adịghị anya, a chụrụ ya na ndị enyi ya abụọ n’ọrụ agha, ha ararakwa ndụ ha nye Jehova Chineke. “Eziokwu Bible nyeere m aka ịhụ ndị iro m n’anya,” ka Hortêncio na-akọwa. “Aghọtara m na site n’ịlụ ọgụ n’agha, m na-eme ihe ọjọọ megide Jehova, n’ihi na Chineke kwuru na anyị ekwesịghị igbu onye agbata obi anyị. Iji gosipụta ịhụnanya a, aghaghị m ịgbanwe ụzọ m si eche echiche ma ghara ile ndị mmadụ anya dị ka ndị iro m.”
Ahụmahụ ndị dị otú ahụ mere eme na-egosi na nkụzi Bible na-akwalite udo n’ezie. Nke a abụghị ihe ijuanya. Aịzaịa onye amụma kwuru na izi ihe Chineke na udo nwere nnọọ njikọ. O buru amụma, sị: ‘Ụmụ gị nile ga-abụ ndị mmụta Jehova; udo nke ụmụ gị ga-abakwa ụba.’ (Aịsaịa 54:13) Otu onye amụma ahụ kwuru banyere mgbe ndị si ná mba nile ga-enuba n’ezi ofufe nke Jehova Chineke iji mụta ụzọ ya. Gịnị ga-esi na ya pụta? ‘Ha ga-akpụgharịkwa mma agha ha nile ka ha bụrụ mma ogè, na ube ha nile ka ha bụrụ mma ịkwa osisi: mba agaghị ebuli mma agha megide mba, ha agaghị amụtakwa agha ọzọ.’—Aịsaịa 2:2-4.
N’ikwekọ n’amụma a, Ndịàmà Jehova na-arụ ọrụ izi ihe zuru ụwa ọnụ bụ́ nke nyewooro ọtụtụ nde aka imeri ịkpọasị nke bụ́ isi ihe na-akpata agha ụmụ mmadụ.
Ihe Na-eme Ka E Jide n’Aka na A Ga-enwe Udo Ụwa
E wezụga izi ihe, Chineke eguzobewo ọchịchị, ma ọ bụ “alaeze” bụ́ nke pụrụ ịhụ na e nwere udo n’ụwa nile. N’ụzọ dị ịrịba ama, Bible na-akpọ Onye Ọchịchị nke Chineke họọrọ, bụ́ Jizọs Kraịst, “Onyeisi Udo.” Ọ na-emesikwu anyị obi ike na “ọ dịghị ọgwụgwụ ọ bụla ịba ụba nke ịbụ onyeisi Ya na udo Ya ga-agwụ.”—Aịsaịa 9:6, 7.
Gịnị mere anyị ji jide n’aka na ọchịchị Kraịst ga-enwe ihe ịga nke ọma n’iwepụ ụdị agha nile? Aịzaịa onye amụma na-agbakwụnye, sị: “Ekworo Jehova nke usuu nile nke ndị agha ga-eme nke a.” (Aịsaịa 9:7) Chineke nwere ọchịchọ na ikike ime ka e nwee udo na-adịgide adịgide. Jizọs nwere obi ike dị ukwuu ná nkwa a. Ọ bụ ya mere o ji kụziere ụmụazụ ya ikpe ekpere ka Alaeze Chineke bịa na ka uche Chineke mee n’ụwa. (Matiu 6:9, 10) Mgbe a ga-emesị mezuo arịrịọ ahụ e ji ezi obi na-arịọ, agha agaghịkwa ebibi mbara ụwa ọzọ.
^ par. 6 Iji nyochaa ihe àmà na-egosi na anyị na-ebi n’ụbọchị ikpeazụ, lee isi nke 11 nke akwụkwọ Ihe Ọmụma nke Na-eduba ná Ndụ Ebighị Ebi, nke Ndịàmà Jehova bipụtara.
Nkụzi Bible na-akwalite ezi udo
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Njedebe nke Agha